Mazuva Ose Wiricheya | Karmanhealthcare.com
A wiricheya yakagadzirirwa kushandiswa kwezuva nezuva kunogona kuiswa muboka pasi pebhuku redu kana simba wiricheya akateedzana. Zvichienderana nezvako zvezuva nezuva zvaunoda uye zviitiko zvaunofanira kukwanisa kuwana zvakakodzera wiricheya yekushandisa kwemazuva ese. Mazuva ese mavhiripu simbisa kunyaradzwa, kugadzikana, uye kushanda.
mavhiripu Inoshandiswa paDaily Basis
mavhiripu anoshandiswa zuva nezuva anofanirwa kunge akasununguka. Nzvimbo yekugara, zororo remakumbo, uye zvigaro zvemaoko zvinofanirwa kunzwa zvakasununguka nguva dzese pasina kukanganisa kugadzikana uye chimiro.
The wiricheya furemu inofanirwa kuve lightweight kubvumira mushandisi kuwedzera maneuverability uye kudzikisira kushushikana pamigumo yavo.
mavhiripu ayo anoshandiswa zuva rega rega anowanzo kuve echinhu chinokwidziridzwa kupfuura a wheelchair yakajairwa. The unhu ye wiricheya inoraira mutengo wechigaro zvachose. Izvi zvinoreva kuti kana furemu iri yakapfava uye yakasimba uye izvo zvikamu zviri nyore uye zvichikosha, ipapo poindi yemutengo ichave zvakare yakakwira kune icho chaicho chigaro.
manyuwari mavhiripu Yekushandisa Kwezuva Nezuva
Kunge chirevo chekare, "Iwe Tora Izvo Chaunobhadhara", unogona kuwana wiricheya iri mukati memutengo wemutengo wako uyo wainge wakagadzirirwa chaizvo kushandiswa kwemazuva ese. Zvimwe zvinyorwa zvezuva nezuva mavhiripu huya zvakajairika nemutsago wechigaro uye kumashure, unogadziriswa kana wakagadzika gumbo zororo, uye yakagadzika kana inogadziriswa mawrestrests.
Zvichienderana nemamiriro ako ezvinhu, ungangoda kutsanangura uye kutsvagisa kuti ndezvipi mhando zvezvinhu zvauchazoda kuti ushandise zuva nezuva.
nezuva mavhiripu inogona kutengwa nematanho akasarudzika, uye chiyero chekutanga-kuseta chechinhu chimwe nechimwe. Izvo zvinogona zvakare kutengwa se tsika fita wiricheya, zvinoreva kuti chigaro chese chigaro, chigaro, uye zvinoriumba zvinoenderana neako urefu uye zviyero.
tsika Fit mavhiripu
Kune vamwe wiricheya-vakawanda vanhu, vachitenga tsika fita wiricheya chinhu chinodiwa. Izvi imhaka yekuti kune akawanda mamiriro anogona kukanganisa hurefu uye kukwirira kwemunhu, kuvadzivirira pakukwanisa kutenga nekugadzirisa denderedzwa chigaro.
Sezvo uchave kushandisa ichi wiricheya zuva nezuva, huremu hwepuremu hwakakosha chinhu. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kutenga iyo wiricheya pazasi makumi mana. shoma uye zvakanyanya a wiricheya akareruka kupfuura makumi matatu.
Mazuva ese Chairs